Cilmi-baadhis Iftiimisay sida Shirkadaha Tubaakada soo Saara u Doonayaan in ay Muslimiinta Ku Fidiyaan Sigaarka | Maankaab.com
Cilmi-baadhis Iftiimisay sida Shirkadaha Tubaakada soo Saara u Doonayaan in ay Muslimiinta Ku Fidiyaan Sigaarka
10th August 2017 | Published by: maankaab
Shirkadaha sameeya tubaakada, ayaa soo qaaday dagaal ba’an oo ay ku dardargelinayaan in waddamada amma dadka Muslimiinta ah lagu dhiirigeliyo cabitaanka tubaakadaas, gaar ahaan haweenka sida ay iftiimisay daraasad cusub oo ay soo saareen khubaro Kanada u dhalatay.
Daraasad lagu eegay shirkadaha tubaakada soo saaray dokumantiyadooda muddo tobannaan sanno ah diyaarinaayeen, kuwaasoo ay ka muuqatay sida ay doonayaan in ay ugu sumeeyaan dadka sida daraasadan oo heer caalami ah lagu sheegay.
Shirkadaha tubaakada soo saara waxa ay kirayteen qareeno ay doonayeen in ugu doodaan aragtidood aah fidinta tubaakada, kadib markii hoggaamiyayaasha Islamku qaar ka mid ah mabnuuceen tubaakada.
“Daraasada waxay iftiimisay sida shirkadaha tubaakadu ay u khalad fahmeen dhaqannad iyo diinta bulshada ilsaamka ah, doonayaana in ay danahooda oo kaliyi u socdo. Waxa ay doonayaan in ay iibiyaan waxyaabo dilay dhammaan macaamiishooda,” ayuu yidhi Kelley Lee oo ah khabiir caafimaad oo ka tirsan Jaamacada Simon Fraser oo daraasadana qayb ka ahaa, kaasoo la hadlay Yahoo Canada News.
Olole laga soo horjeedo cabitaanka tubaakada, ayaa guul ay ka gaadheen waddamada reer galbeedko, inkastoo cabitaanka sigaarku hoos uga dhacay Waqooyiga Amerika iyo Yurub, haddana soo saairsta sigaarku kor buu u kacay, gaar ahaan waddamada dakhligoodu meelaha dhexe ku jiro.
Marka lagu noqdo 1979kii, shirkadda British American Tobbaco waxa ay aad diirada u saaraysay dadka Muslimka ah sida uu iftiimiyey qorshaha shirkaddu oo ay dibada u soo saareen cilmi-badhayaashu.
“Tubaakada loogu talagalay in dunida islamka la geeyo waa mid aad khatar u ah, waxaana shirkadaha soo saara ku dagaalamaan in aan la mabnuucin,” ayey yidhaahdeen khubarada daraasada soo saartay.
Sida ay daabacday jariirada The Lancet oo caafimaadka ka warranta, dalka China wuxuu noqday suuqa ugu ballaadhan ee tubaakada laga soo saaro, iyadoo waddamada reer galbeedka cabitaanka tubaakado hoos uga dhacayso, halka waddamada Indonesia ka mid tahayna ay 60% ragga bulshadaas ka mid ah si joogto ah u cabaan.
Sannadkii 2012ka in ka badan $9.17 bilyan ayaa lagu kharashgareeyaa xayeysiinta iyo dhiirigelinta cabitaanka tubaakada sida ay iftiimisay Xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada (CDCP) ee dalka Kanada, iyadoo taas macnaheedu tahay in $25 milyan maalintii lagu iibsado tubaako amma hal milyan oo doollar.